Madaxweyne Xasan Sheekh oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Sucuudiga ee Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka Sucuudiga ee Soomaaliya
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub oo ay dowladda Sucuudiga usoo dirtay dalka Soomaaliya, iyadoo uu arrinkaan kusoo beegmay xilli kala guur ah oo ay Soomaaliya ku jirto doorashooyinka.
Safiirka cusub ee Sacuudiga Dr. Maxamed Cabdi-kani Al-Khayat ayaa maanta xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho kula kulmay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isagoona kadib ku wareejiyay waraaqihiisa safiirnimo.
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo safiirka ayaa waxyaabaha ay kulankooda uga hadleen ka mid ahaa xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Sacuudiga.
Kulanka kadib, madaxweyne Xasan Sheekh ayaa safiirka uga mahad-celiyey imaanshihiisa dalka Soomaaliya, wuxuuna u ballan qaaday inuu ku gacan siin doono howsha ballaaran ee uu Soomaaliya ka qaban doono.
Dhinaca kale, safiirka cusub ee Sacuudiga Dr. Maxamed Cabdi-kani Al-Khayat ayaa sidoo kale kulanka kadib saxaafadda la hadlay u sheegay in kulankaasi uu ahaa mid isbarasho, islamarkaana caddeyn u ah inuu madaxweynaha Soomaaliya ee rasmiga ah uu weli yahay Xasan Sheekh Maxamuud.
Ugu dambeyntii, safiirka ayaa sheegay in goor dhow la arki doono howlo badan oo dowladda Sacuudiga ka fuliso Soomaaliya, taas oo kor usii qaadeysa xiriirka dheer ee taarikhiga ah oo ka dhaxeeya labada dal.